Torohevitra marina momba ny vokatra angovo sy fiarovana ny tontolo iainana
Fotoana fandefasana: Sep-01-2020
Ny efijery fahombiazan'ny singa marobe dia fitaovana fizahana olona sy manan-tsaina noforonin'ny orinasanay araka ny fangatahan'ny tsena sy ny famokarana. Fampisehoana sy toetra mampiavaka ny singa marobe ...Hamaky bebe kokoa »
Fahaiza-misafidy efijery mihetsiketsika tsipika
1. arakaraka ny fisafidianana ny habaka Ny halavany sy ny sakan'ny tranokala dia tokony hojerena amin'ny karazan-tsivana amin'ny vibration linear; indraindray ny sakan'ny outlet amin'ny efijery mihetsiketsika dia voafetra, ary ny haavon'ny tranokala i ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fizotry ny fizahana manontolo an'ny motera mihetsiketsika dia ny manala sary sy manome naoty ireo fitaovana. Ny fitaovan'ny miavaka manokana dia mizara ho fitaovana ambony sy ambany. Ny fahombiazan'ny fitiliana dia tokony ho avo, ny pr ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny motera vibration sy ny motera mahazatra
Môtô vibrant: ny motera hovitrovitra dia miaraka amina andian-tsoratra eccentric azo ovaina amin'ny tendrony roa amin'ny vatan'ny rotor, ary ny herin'ny fientanam-po dia azo avy amin'ny hery afovoany ateraky ny fihodinan'ny haingam-pandeha sy ny sakana eccentric. Ny elanelan'ny hatetika a ...Hamaky bebe kokoa »